Ho an’ireo tsy tafiditra tao Mahamasina… : hisehatra eny Soavinimerina ry Mahaleo | NewsMada
Ho an’ireo tsy tafiditra tao Mahamasina… : hisehatra eny Soavinimerina ry Mahaleo
Roa andro mialoha, lany avokoa ny tapakila. Tsy dia mahagaga izany ho an’ny tarika Mahaleo. Sahirana ireo mpijery tara famandrihana, tamin’ilay seho notontosaina ny 4 marsa lasa teo, tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Ireo nikiry hjery, nividy tapakila hatrany amin’ny 30.000 Ar ny iray. Ireo tsy afaka kosa, nampionon-tena namonjy fodiana…
Ho azy ireo indrindra ny fotoana manaraka. Fantatra fa hotohizana ny alin’ny zoma 22 avrily izao, eny amin’ny Eldorado Soavinimerina ny « Veloma ry fahazazana ». Ilay fampisehoana izay notontosaina tetsy Mahamasina, ka niarahan’ny rehetra niredona hatramin’ny farany ireo hira izay nalahatry ny tarika io. Amin’ny maha famerenana azy, azo antoka fa hatao avokoa ireo hira izay tena nisongadina nandritra ny seho, indrindra ireo nangataham-pamerenana. Mazava loatra anefa fa tsy tena hitovy ny seho, na ny toerana nanaovana azy fotsiny ihany aza.
Fanombohana sahady ny fanamarihana ny faha-45 taon’ny tarika Mahaleo ny seho rehetra izay tontosain’izy ireo amin’ity taona ity. Tsy hijanona mihitsy fa vao misy fotoana hahazoana miaraka dia raikitra hatrany izany. Fantatra mantsy fa ho any Antsirabe indray ny tarika ny 29 avrily ho avy izao, ao amin’ny efitranon’ny Hôtel des Thermes. Ao amin’ny kianjan’ny sekoly Saint Joseph Antsirabe kosa ny alahady 1 mey.